Miyuu Mbappé ku riyoonayaa xirishada maaliyada Real Madrid? – Xiddiga oo jawaab kulul bixiyay – Gool FM
(Paris) 24 Maajo 2022. Xiddiga kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé, ayaa ka hadlay riyada ah inuu xirto maaliyada naadiga Real Madrid, kaddib markii uu qandaraaska u kordhiyay PSG.
Hadalka Kylian Mbappé ayaa yimid kaddib laba maalin kahor markii uu heshiiska u cosbooneysiiyay kooxda Paris Saint-Germain, kaasoo gaaraya ilaa 2025, si loo soo afjaro wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan tillaabada mustaqbalka.
Haddaba wargeyska Marca ee dalka Spain ayaa wuxuu daabacay wareysi uu bixiyay Kylian Mbappé, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan diirada saarayaa kaliya Paris Saint-Germain.”
“Miyaan ku riyoodaa inaan u ciyaaro Real Madrid? Waxaan u maleynayaa inay ixtiraam darro tahay inaan sheego in riyadeydu ay tahay inaan u ciyaaro Real Madrid kaddib markii aan saxiixay qandaraaskeyga maalmo kahor.”
“Riyadu way wanaagsan tahay, laakiin maanta waxa aan diirada saarayaa oo kaliya qandaraaskayga cusub, wakhtigan xaadirka ah, ma ogid waxa dhici kara.”
“Waxaan heystaa qandaraas 3 sano ah, haatanna waxaa lagama maarmaan ah in aan diirada saaro sanadkeyga Paris Saint-Germain.” ayuu yiri Kylian Mbappé.